Dhawrsanaanta xogta - BBC News Somali
Xogta shaqsiyadeed ee aad soo gudbisay waxa ay BBC-da u isticmaali doontaa hawsha abaalmarintan.
BBC-da waxa ay isticmaalaysaa xogtaada si waafaqsan habka sharciga ah ee hay'ad warbaahineed ee soo saarista wararka, iyo hal abuurnimada oo ay ka tahay dhiirragalinta dadka leh hibbooyinka cusub. Khadka internetka ayaa waxaa martigalinaya dhinac saddexaad oo BBC-da wakiil ka ah, dhinacaas oo ah Monterosa.
Ma jirto xog shaqsiyadeed oo lala wadaagi doono dhinacyada saddexaad adiga oo aanan ogolaansho lagaa haynin marka hore. Hase yeeshee dadka laga soo dhex xushay tartamayaasha ayaa khadka lagu soo daabici doonaa magacyadooda iyo halka ay ku noolyihiin, waxaana lagu barbar qori doonaa xogta qofka guuleystay iyo kan kusoo xigay.
Dhammaan xogta shaqsiyadeed waxaa lagu kaydin doonaa meel bad qabta, waana la tirtiri doonaa isla habeenka la qabto xafladda abaalmarinta lagu shaacinayo taas oo lagu qaban doono magaalada Hargeysa, 18-ka, Luuliyo, 2018.
Haddii aad wax su'aal ka qabtid qaabka loo maamulay xogtaada fadlan kusoo hagaaji ciwaanka ah lynn.kariuki@bbc.co.uk . Xogta Guuleystayaasha iyo dadka kaalmaha xiga waa la kaydin doonaa muddo labo sano ah sababo la xiriira maamulka.
Xeerka BBC-da ee la xiriira dhawrsanaanta xogta shaqsiga halkan hoose ka akhri www.bbc.co.uk/privacy